Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि खिचिएको भिडियो सार्वजनिक – Emountain TV
काठमाडौं, ३० साउन । माउण्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले चितवनमा आत्महत्या गर्नुअघि खिचिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
यो भिडियो सार्वजनिक भएसँगै पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरण गम्भीर मोडमा पुगेको छ । पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि खिचिएको भिडियो चितवन प्रहरीले सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेका बेला उनकै परिवारले एक सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक गरिदिएका हुन् । पुडासैनीको रुँदै बोलिरहेको भिडियो करिब ११ मिनेटको रहेको छ ।
नुवाकोट बेलकोटगढी ३ मा स्थायी घर भएका पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गरेको विषयले केही समय यता नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई तरंगित गरेको छ । भिडियो सार्वजनिक भए पनि भिडियो र पुडासैनीको आत्महत्याका सम्बन्धमा प्रहरीको थप आधिकारिक भनाई अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यस अघि नै घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको मात्र जनाएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान जारी रहेकोले यसबारेमा थप सत्य तथ्य छिटै नै सार्वजनिक हुनेछ भन्ने विश्वास माउण्टेन टेलिभिजनले गरेको छ ।